Zelensky wuxuu ka digay in ciidamada Ruushka ay isku dayi doonaan inay la wareegaan Kiev caawa | Entertainment and News Site
Home » News » Zelensky wuxuu ka digay in ciidamada Ruushka ay isku dayi doonaan inay la wareegaan Kiev caawa
Zelensky wuxuu ka digay in ciidamada Ruushka ay isku dayi doonaan inay la wareegaan Kiev caawa
daajis.com:- Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa Sabtidii ka digay in ciidamada Ruushka ay isku dayi doonaan inay qabsadaan caasimadda Kiev ka hor waaberiga, iyadoo Ruushku uu diiddan yahay qaraar Qaramada Midoobay ku cambaareeyey duullaankiisa, dalalka reer galbeedkuna waxay ku dhawaaqeen cunaqabatayn shakhsi ah oo lagu bartilmaameedsanayo Vladimir Putin. Lasoco blog-geena tooska ah wixii ku soo kordha.
Wax yar ka dib saqdii dhexe, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa soo saaray warqad digniin ah in ciidamada Ruushka ay “isku dayi doonaan inay duulaan” caasimadda. Horaantii fiidnimadii jimcaha, markii ay ciidamada Ruushku ku soo dhawaadeen caasimadda, Zelensky waxa uu soo galiyay muuqaal diidmo ah oo uu ku sheegayo in uu joogo Kiev oo aanu ku dhowayn in uu baxo.
Dadka rayidka ah ee ku nool Kiev ayaa hubka qaadanayay maalintii oo dhan waxayna dowladdu baahisay tilmaamo ku saabsan sida loo sameeyo Molotov cocktails.
Ruushka ayaa sidii la filayey waxa uu diiday qaraar Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay uu Jimcihii ku cambaareeyey duulaanka ay ku qaadeen dalka Ukraine, kana dalbanayaan inay si degdeg ah ciidamadooda ula baxaan. Kow iyo toban ka mid ah shan iyo tobanka xubnood ee golaha ayaa u codeeyay soo jeedinta.
Shiinaha, India iyo Imaaraadka ayaa ka aamusay codbixinta. Moscow waxay soo bandhigtay dalab ah inay wadahadal la yeelato Kiev. Afhayeen u hadlay xafiiska Zelensky ayaa sheegay in Ruushka iyo Ukraine ay ka wada hadlayaan xilliga iyo goobta uu wadahadalku ka dhici doono.
Midowga Yurub, Maraykanka, iyo Boqortooyada Ingiriiska ayaa leh hanti ay leeyihiin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo wasiirka arrimaha dibadda Sergei Lavrov. Zelensky waxa uu sheegay in 137 militari oo Yukreeniyaan ah iyo dad rayid ah lagu dilay 316 kalena lagu dhaawacay maalintii ugu horeysay ee dagaalka maalintii Khamiista.
Wasaaradda difaaca ee Ukraine ayaa sheegtay in in ka badan 1,000 askari oo Ruush ah la dilay. Lama xaqiijin karin tirada dhimashada. In ka badan 50,000 oo reer Ukraine ah ayaa u qaxay, badi Poland iyo Moldova, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay. Haddii blog-ka tooska ahi aanu soo bixin, fadlan dib u soo kici bogga.